Myanmar Stage Drama - ပြိုကွဲလုဆဲဆဲ မိသားစုတစ်စုး | Who Has TornaChristian's Family Apart? | နိုင်ငံတော်သက်ဆင်းကြွရောက်ခြင်း၏ ဧဝံဂေလိတရားတော်
Myanmar Stage Drama - ပြိုကွဲလုဆဲဆဲ မိသားစုတစ်စုး | Who Has TornaChristian's Family Apart?
စုရှန်ချန်းသည် စုဝေးပွဲတစ်ခုတွင်ရှိနေစဉ် အဖမ်းခံရပြီး စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့် သူမ၏အမျိုးသား ချန်ကျင်းဝေသိရှိသောအခါ သူသည် သူ၏အထက်လူကြီးထံသို့ ယင်းကို တင်ပြသည်။ သူ၏ အထက်လူကြီးသည် သူ့အား စုရှန်ချန်းကို သူမ၏ယုံကြည်မှုကို စွန့်လွှတ်ဖို့ အတင်းအကျပ်ပြုရန် ခြိမ်းခြောက်ပြီး အမိန့်ပေးသည်။ ဤသို့မပြုလျှင် သူသည်လည်း အမှုပတ်မည်ဖြစ်ပြီး ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် စစ်တပ်မှ ထုတ်ပယ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ကျင်းဝေသည် သူ၏ရာထူးနှင့် အသက်မွေးမှုကို ကာကွယ်ရန်အားထုတ်ရာတွင် ကြမ်းသော၊ နူးညံ့သောနည်းလမ်းနှစ်ခုလုံးကို အသုံးပြုလျက် ရှန်ချန်းအား အယုံသွင်းရန် ကြိုးစားပြီး သူမအား စုဝေးပွဲများသို့သွားခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ခြင်းအား တားမြစ်သည်။ သူမအား သူမ၏ ယုံကြည်မှုနှင့် သူမမိသားစုနှစ်ခုကြား ရွေးချယ်မှုပြုဖို့ အတင်းအကျပ်စေခိုင်းရန်အတွက် အခြားမယုံကြည်သူမိသားစုဝင်များကိုလည်း ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ သူ ခေါ်ယူသည်။ ရှန်ချန်းသည် မည်သည့်တစ်ခုကို ရွေးချယ်မည်နည်း။ ကျေးဇူးပြု၍ စတိတ်စင်ပြဇာတ် ပြိုကွဲလုဆဲဆဲ မိသားစုတစ်စုကို ကြည့်ရှုပါ။